DARYEELKA SAXDA AH EE DHIRTA YARYAR EE DHERYAHA GURIGA: NOOCYADA DALAGYADA CAWSKA KU JIRA, NUUCYADA KORITAANKA NOOCYADA KALA DUWAN EE INDOORKA, QALADAAD EE BEERAHOODA - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay daryeelka muraayadaha mini-ga ee dheriga loo baahan yahay iyo sida loo koro si haboon guriga?
Caajisku wuxuu soo baxaa - warshad qafiif ah oo udubdhexaad ah kaas oo noqon doona quruxda ugu fiican ee guriga loogu talagalay ama alpine. Si ka duwan sida-aadanku caadiga ah, waa ka sahlan in lagu xanaaneeyo a cork, waxaa u blooms xilli xilli oo dhan.
Maxay yihiin sifooyinka muuqaalkan xiisaha leh? Sida loo daryeelo isaga? Maxay yihiin noocyada dhalidda ubaxa? Jawaabaha su'aalahan iyo su'aalaha kale waxaa laga heli karaa maqaalkeena.
Tilmaanta iyo sifooyinka
Noocyada dalagyada cawska
Noocyadaas waxaa loo soo bandhigay Yurubta Bengal, taas oo uu magaceeda ku helay. Bengal ayaa kor u kacay baadiyaha dhererka 40-50cm. Caleemaha waxaa lagu tilmaamay, cagaar madow. Qaababka ubaxa waa yar yahay, oo midabkoodu wuxuu noqon karaa casaan, caddaan ama casaan.
Tea Rose waxaa laga keenay China. Carafku waa qadarinta urka shaaha, taas oo ay magaceeda ku soo gashay. Waxaa jira nooc kale - ubaxyada ubaxu waxay u eg yihiin qaabka shaaha shaaha shiineeys ah. Daaqsi of this kacay Rose kor u 50cm. Caleemaha waa cagaar madow. yeelo qaab muuqaal ah. Ubaxku waa laba, weyn, midabkoodu wuxuu noqon karaa mid aad u kala duwan.
Noocani waxay leedahay ubax dheer. Tani waa nooca kaliya ee qaboobaha kaas oo aad samayn karto shaaha.
The baadiyaha of this noocyada xiisaha leh ee-aadanku dwarf u eg yahay bouquet dhammaatay. Looma qaybiyo iibinta fasalka, sidaas darteed waxaa loo yaqaanaa. Waxay ku dhacdaa marin (illaa 30cm) iyo bare (ilaa 50cm). Waxay leedahay midabo kala duwan. Ubax ee cabbirka dhexdhexaad ah
Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa badan-ubax. Waxay gaari kartaa dherer ah 50 cm.Dhulku waa yar yahay, gawaarida ama semi-double, ma urinayaan. Ubaxuhu waxay ku ururaan inflorescences, waxay ku kala duwan yihiin noocyo kala duwan oo midabo ah.
Waxay ka tirsan tahay qoyska Rosaceae. Inta badan, dhalashada ubaxyada - dhirbaaxo badan oo dhirta, oo dhererkiisu kala duwan yahay 10 ilaa 50 cm. Caleemaha waa bedel, kakan, oo leh shuruudaha, mid kasta oo ka mid ah 5-13 caleemo oo ah qaabka ovalaha ah ama qaabka loo qaabeeyey. Dusha sare ee caleemuhu waxay noqon karaan kuwo dhalaalaya ama mataan, midabkoodu caadi ahaan waa cagaar madow.
Maqsinnada noocyada ugu badan ee dhufanayada dhirta ayaa lagu daboolay qodax. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waxay noqon kartaa 1 illaa 5 cm. Ubaxa wuxuu noqon karaa mid sahlan, gaajo iyo semi-double. Qaabkoodu waa ciriiri, flat, goblet ama koob. Nooca tufaaxa ayaa sidoo kale noqon kara mid ka duwan: waxay yihiin kuwo is dulfuulan, guri dabaq ah ama qallalan. Goolasha saafiga ah waxay noqon kartaa midabyo iyo midabyo, oo aan lahayn buluug iyo buluug oo keliya.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee soo galootiga ah waa cabbirka yar. Muuqaal kale ayaa ah in noocyada noocan ah ay ku haboon tahay in lagu koro gudaha gudaha iyo dibedda. Xajmiga miro-yar-yar ayaa ka dhigaya mid ku haboon in ay ku koraan guriga, iyo sababtoo ah caabbinta qabowga, waxay sidoo kale ku haboon yihiin dhulka furan.
Muuqaal kale oo muuqda oo ka mid ah qaboojintan - waxay noqon doonaan qurux weyn oo loogu talagalay xuduudaha, balbalooyinka iyo jaraa'idyada, oo mar labaadna ay uga mahadcelinayaan cabbirka yar.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka noocyada guryaha ee koraya ee dhaadheer
Faa'iidooyinka koritaanka xooga koraya ee guriga waxaa ka mid ah:
muddada ubax dheer;
noocyo kala duwan iyo midabo;
iska caabinta cudurada iyo cayayaanka.
Faa'iidooyinka ay ku koraan ubaxyada ku jira guriga waxaa ka mid ah:
Goolasha dhirbaaxada ayaa ah mid aad u badan oo aan caadi ahayn;
cabbirka yar (ma aha qof kastaa wuu jecel yahay).
Taariikhda dhufanayada geela maahan mid gebi ahaanba cad. Waxaad ka heli kartaa dhowr nooc oo asalka ah noocyada kala duwan ee ilaha kala duwan: qaar ka mid ah waxay yiraahdeen Europe waa goobta lagu qurxiyo ubaxa, qaar kalana waxay aaminsanyihiin in laga soo dhoofiyey Koofur-bari Aasiya. Laakiin sida laga soo xigtay nooca casriga ah waxaa la aaminsan yahay in kor u kaca minka laga keenay China.
Marka koraan mini-Rose, waa lagama maarmaan si loo hubiyo in sarrifka hawada wanaagsan, waayo booska ugu fiican ee goobta uu noqon doonaa balakoonka. Waxaad dhejin kartaa dhoobo iyo daaqadaha, laakiin badanaa waxaad u baahan doontaa inaad furto daaqada. Xilliga xagaaga waxaad ubax kula qaadan kartaa wadanka.
Inta lagu jiro ubax, taas oo dhacda xagaaga, dhirta u baahan tahay hawo cusub, Sidaa darteed iskuday mar kasta oo ay suurtagal tahay in ubax lagu sameeyo balakoonka ama loggia.
Xasuuso in aadanku jecel yahiin kuleyl xoog leh, markaa ha isku dayin in aad adkaato carrada. Dooro dheriyada iftiinka iftiinka, iyo xilliga kulul, ku duub weel ubax leh ubax leh qalab milicsi.
Heerkulka qolka wuxuu noqon doonaa mid ku habboon goglan leh. Hawada qabow waxa kale oo ay waxyeello u geysaneysaa, markaa hubi in maalmaha qaboobaha uusan ku dhicin daaqadaha, iyo haddii aad isticmaasho qaylo-dhaan ama hawo qaboojiye, ka fogee geedka.
Inta lagu jiro horumarinta iyo ubax of a-aadanku, hubi inaad ku buufin. Waxaad qubeysan kartaa qubeys diiran toddobaadkii hal mar.
Xaqiiqdii waa suurtagal in la iska indha tiriyo qoyaanka, maadaama ay taasi horseedi karto qalajinta caleemaha ama, xitaa ka sii daran, muuqaalka cayayaanka (oo ku saabsan hoos).
Caajisku wuxuu soo baxaa - dhirta iftiin-jecel, sidaas darteed, iftiinka wuxuu u baahan yahay fiicnaan. Laakiin qorraxda xagaaga ee qiiqa ayaa waxyeeli karta ubaxa, markaa iskuday inaad ka ilaaliso qorraxda tooska ah, gaar ahaan duhurkii. Saacadaha subixii iyo habeenkii, qorraxdu maaha mid halis u ah gogol.
Xannaanaynta iyo daryeelka saxda ah ee ubaxyada dheriga
Soo saarista waxaa lagu fuliyaa sharciyada soo socda:
Haddii weelka hore loo isticmaalo, ku nadiifi burushka, ha isticmaalin saabuunta.
U baahan tahay inaad sameysid dheecaan wanaagsan. Sidaa awgeed waxaad isticmaali kartaa dhoobo ballaaran: haddii uu jiro daloolka dheriga, lakabka dhoobo ee la ballaariyey waa inuusan ka badneyn 1 cm, laakiin haddii aysan jirin godho, kadibna ugu yaraan 3 cm.
Earth wuxuu u baahan yahay in loo isticmaalo nafaqo iyo neefsasho. Waxaad ka iibsan kartaa ciidda dukaanka ama waxaad isku dubeysid, isku daridda cawska, humus iyo ciidda 4: 4: 1.
Xilliga xagaaga, waxay u baahan tahay geedka sare iyo waraabinta joogtada ah. Ha u ogolaanin in dhulku qalalo. Laakiin haddii xagaaga waa qabow, ka dibna ha ka xoog badnayn dhirta, waayo waxa badan oo qoyaanku waa ka sii liidan la'aanta. Ka dib dhamaadka ubax, waraabinta waa in la joojiyaa. Inta lagu jiro xilliga jiilaalka waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo curyaanka, laakiin marar dhif ah, 1-2 jeer halkii marba waa ku filan.
Waraabinta waxaa la cusbooneysiiyaa muuqaalka korniinka ubaxa waxayna kordhisaa koritaanka iyo muuqaalka caleemaha cusub.
Biyaha waraabinta waa inay ahaadaan kuwo kulul, oo aan ka yarayn heerkulka qolka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo koror oo kaliya ee mudada guntinta iyo ubax. Marka 10 maalmood oo kasta ku quudiyaan ubax leh bacriminta gaarka ah ee dhirta ubax. By dhamaadka ubax (by bilowga dayrta), quudinta waa in la joojiyo.
Gooyaa waa in la sameeyaa ka dib markii uu dhirta uu soo daahay, laakiin manjooyin guga ayaa sidoo kale la samayn karaa. Ku daa 4-5 ku hari laan kasta, oo ka qaado inta kale (marka laga reebo caleemaha). Dhirta gooyaa - fure u ah ubax badan, waa in la fuliyaa daruuri.
A potted Rose ma jecla transplanting, sidaas waxaa lagu sameeyaa oo kaliya haddii dheriga yar yahay.
Bisilis waxaa loo sameeyaa sida soo socota:
Dooro weel wayn, nadiif oo maydh.
Warshadu waxay leedahay xididdo aad u jilicsan, kuwaas oo aad u fudud in ay waxyeello, sidaas darteed waxaa ka wanaagsan inaad qoyaan dheriga leh ubax nus saac. Sidaa awgeed kubad ballaadhan ayaa si fiican uga soocaya dheriga.
Waxaan u wareegaynaa qoryaha dhulka ku jira weel cusub, ku rusheey dhulka iyo si fiican u dhaji hareeraha geedka.
Waraabiyo Rose ka dib markii transplanting laguma talinayo. Ku rid meel gudcur ah asbuucii, ka dibna dib u dhig meeshii guban lahaa.
Si looga hortago infakshanka ubaxa, waxaad u baahan tahay:
Hubi in ciidda aan la dhaafin.
Hayso qoyaan ku filan.
Ka ilaali geedka qoob ka ciyaarka.
Ka ilaali ubaxa qorraxda tooska ah.
Sidoo kale, ka dib iibsashada geedka, waxaa suurtogal ah in lagu daweeyo Rose oo leh Fitoverm, kaas oo bixin doona ilaalinta cayayaanka.
Kala saarida dhaqamada gudaha
U faafi cirku oo kiciyo. Tan samee sidan soo socota:
Iyada oo caawinta mindi, kaas oo waa in lagu daaweeyaa xal of daloolka potassium, gooyaa jirida 10 cm dheer.
Goynta waa in si toos ah loo sameeyaa ka kelyaha, waa wax la jecel yahay in ay ahaato.
Samee jaranjarada sare 5mm ka sarreysa kalyaha.
Ka saar caleemo hoose ee jarista.
Ku rid goynta biyaha ilaa 10 saacadood.
Gooyn dhirta ee isku dar ah isku darka ciid iyo peat.
Waraabinta xoog leh looma baahna, haddii kale gooynta ayaa laga yaabaa.
Hubi heerkul deggan oo ah ugu yaraan 18 digrii oo ka ilaali gooynta qorraxda tooska ah.
Hoyga guryuhu waxay saameyn kartaa cudurada iyo cayayaanka sida:
Chlorosis Muuqaalka kacaawinadan waxaa lagu aqoonsan karaa caleemo hurdi ah. Iyadoo chlorosis ay si firfircoon ula dagaalamaan chelate birta.
Macmacaanka macaanka. Dhibco cad on caleemaha iyo jirridda dhirta ayaa muujinaya muuqaalkiisa. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta fungicides.
Caarada caarada Cayayaanka Tani waxay ka baxaysaa webka khafiif ah inta u dhaxaysa caleemaha. Si loola dagaallamo, isticmaal daawooyinka Fitoverm iyo Apollo.
Thrips iyo aphids. Cilladda caleemaha iyo ubaxyada waxay muujinayaan in geedka uu ku dhaco cayayaankaas. Daaweynta adoo isticmaalaya sunta cayayaanka ee dhirta gudaha.
Cillado, cawaaqib iyo hagaajintooda
Dhibaatooyinka leh dheelka mini-soocidda ee guriga ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka soo baxaan daryeel aan habooneyn. Dhibaatooyinkee ayuu noqon karaa?
Warshadu ma kobocdo mana koraan. Sababtu waxay noqon kartaa cunto aan caadi ahayn. Si loo tirtiro dhibaatada waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u quudiso ubaxa.
Caleemo qallalan. Sababta ayaa ah sunta kor u kaca ee carrada. Xallinta masiibadu waxay noqon kartaa carro xun.
Leaves waxay noqdaan huruud iyo hurdo. Ma aragtay dhibaatadaada dhirtaada? Sidaas darteed isagu ma laha iftiin ku filan! Dooro meel wanaagsan oo iftiin leh, iyo xilliga qaboobaha isticmaal nalal dheeraad ah qaabka nalalka.
Rose ma Bloom. Xaqiiqdu waxay tahay in aadan walbahaarin muddo gaaban! Inkasta oo ayan jeclaan tan, hannaankani waa in la fuliyaa mar 2 sano kasta.
Muraayad yar ayaa ah hab weyn oo lagu qurxiyo gurigaaga. Noocyada kala duwan ee noocyada iyo noocyada ayaa kuu ogolaanaya inaad sameysid doorasho nafta nuucyada kala duwan. Dabcan, way adagtahay in la daryeelo iyada, laakiin natiijada shaqadaada ma noqon doonto mid gaabis ah sugitaanka - ubaxaaga ayaa kugu farxi doona waqti dheer oo ay la socdaan.